VSI Sand Making Machine - Tanzania Bread
Tanzania Crusher>>stone crusher machine>> VSI Sand Making Machine
article from: stone crusher machine | fotoana: Aprily 3, 2013 | Tag:stone crusher machine	|
VSI Sand Making Machine, Shanghai XSM dia fitaovam-pambolena matihanina matihanina, VSI Sand Making Machine, fitaovana fiofanana mekanika, orinasa mpamokatra varotra fanafody. Ny fitrandrahana harena an-kibon'ny tany, ny voalohany bande conveyor, vibrating feeder, fitaovana fandefasana entona handefa ny jaw crusher, impact crusher, hydraulic crusher dia harona matevina matevina, ary faharoa amin'ny a jawcrusher kely, hammer crusher Fitrandrahana harena ankibon'ny tany faharoa tadin efijery Ny fihaonana amin'ny mari-pamantarana maromaro amin'ny ore dia entina mankany amin'ny baolina baolina, ultrafine mill ert magnetic separators, flotationmineral machine dia mifidy karazam-pahalalana maro samihafa. Mazava ho azy, fa fanodinana fitrandrahana harena ankibon'ny tany fotsiny ity, Shanghai XSM mifototra amin'ny karazan-kira misy anao fitaovam-pako izay mifanandrify tsara anao, raha manana fanontaniana ianao, dia miangavy anay hifandray aminay na tsindrio ny tsara eo amin'ny sehatry ny famolavolana, ny mpiasa ara-teknika dia manome anao valiny amin'ny antsipiriany.
1. Vitsy kely ny fandotoana vovoka sy tabataba.
2. High efficiency sy ny fihenana ambany.
3. Ny fitaovana sarobidy indrindra dia mety ho simba.
4. Ny vokatra farany amin'ny kibay sy ny vidiny ambany.
5. Mitondra fitaovana miorina ampiasaina amin'ny rafitra manokana.
6. Manamafy ny rafitra sy ny fahamendrehana amin'ny teknôlôjika mafana.
7. Fahombiazana ambony, fikojakojana sy fametrahana tsara.
8. Ny fanamorana ny alàlan'ny fanamorana ny solika dia manome sombin-damba miteraka ambany.
Ny VSI Sand Making Machine dia nahitana rindrina lozam-pirafesana voalohany tamin'ny rindrina, ny fiantraikan'ny rivotra manitsy ny tady, ny dingana faharoa amin'ny fiakarana amin'ny rindrina, ny rotor, ny takelaka fiara, ny banga, ny fikolokoloana fisakofana, ny fanokafana ny fanamboarana, ny fiatoana fahatelo, ny fiarovana bar sy ny sisa.
4. Fandefasana fiara fitaterana
modely B-VSI7611 B-VSI8518 B-VSI9526 B-VSI1140
Fahafahana (T / h) Mamafaza ao amin'ny Center et Sides 120-180 200-260 300-380 450-520
Rotation speed (r / min) 1700-1890 1520-1690 1360-1510 1180-1310
Ny lanjany manontolo dia * h * h (mm) 3700 × × 2150 2100 4140 × × 2280 2425 4560 × × 2447 2778 5000 × × 2700 3300
Herin'aratra 380V, 50HZ 380V, 50HZ 380V, 50HZ 380V, 50HZ
Vibrating Sensor Famaritana: 0.1-20mm / s manohy ary miovaova
Fandrobana sy toeram-piantsoana Power 2 × 0.31kw
Fiantohana ny fiarovana Volavolan-dipoavatra dipoavatra mahafeno ampy ny solika;
automatique tsy misy riandin'ny solika na hery hydraulic;
Mampidina ny mari-pana amin'ny rano mangatsiaka amin'ny fahavaratra; Atsangano ny mari-pana amin'ny motera amin'ny ririnina.
Fanampanana ankapobeny l * w * h (mm) 820 × × 520 1270 820 × × 520 1270
Herinaratra mpanodina solitany 2kw
Fanamarihana: Io famaritana io dia famaritana fotsiny, ny fanovana rehetra dia miankina amin'ny VSI Sand Making Products.
1. Foibe famokarana:
Ny fitaovam-bokatra dia mianjera ao anaty fantsom-bokatra, avy eo amin'ny famokarana sakafo ao afovoan-trano ary miditra
ny rotorana avo lenta izay hamoaka ireo fitaovana avo lenta (amin'ny 60-75m / s). Ny fitaovam-pako dia mamely ireo fitaovana izay maimaim-poana. Avy eo, mametraka ny fitaovam-pandrafetana ao amin'ny vortex na ny fiofanana ny fiara ary manangona ny tampon'ny fihorohoroana. Izany dia afaka mamolaka fifamoivoizana mihidy amin'ny alalan'ny rafitra fantsom-pifandraisana. Avy eo dia tapaka ny vokatra. Aorian'izay, ny fitaovana mihaza amin'ny fitaovana voatifitra avy amin'ny rindrina dia mamorona fitaovana tsy tapaka. Farany, ny fitaovam-pandravahana dia voatery hivoaka amin'ny farany ambany amin'ny lavaka.
Ny fitaovana vita sokitra dia hizara ho an'ny faritra roa amin'ny alàlan'ny takela-pamokarana rehefa latsaka ao anaty lavaka fanangonan-trano sy lavaka. Ny ampahany amin'ireo fitaovana dia mamakivaky ny takela-pamokarana ary miditra ny rosidina haingam-pandeha haingana ary avy eo dia mihamitatra sy mivoaka. Ny ampahany hafa dia mianjera avy amin'ny sisin'ny mpaninjara. Ny fitaovam-pitsaboana dia mamely ny fahalalahana manongam-panjakana. Ny fitaovam-pako dia mamely ireo fitaovana izay maimaim-poana. Avy eo, mametraka ny fitaovam-pandrafetana ao amin'ny vortex na ny fiofanana ny fiara ary manangona ny tampon'ny fihorohoroana. Izany dia afaka mamolaka fifamoivoizana mihidy amin'ny alalan'ny rafitra fantsom-pifandraisana. Avy eo dia tapaka ny vokatra. Aorian'izay, ny fitaovana mihaza amin'ny fitaovana voatifitra avy amin'ny rindrina dia mamorona fitaovana tsy tapaka. Amin'ny farany, ny fitaovam-pandravahana dia havoaka amin'ny faran'ny diplaoma.
Wiki puzzle.svg →